TSMT yakagadzirira kuve neiyo miniLED skrini yeiyo nyowani MacBook Pro yakagadzirira mukupera kwa2021 | Ndinobva mac
Manuel Alonso | 04/05/2021 12:00 | Noticias
Mushure mekunge Apple yaburitsa iyo nyowani iPad Pro ine miniLED skrini uye ngaive iri kambani Taiwan Pamusoro Kuwedzera Technology (TSMT) iyo yega inopa ino tekinoroji, yakagadzirira kuita zvakafanana asi yeMacBook Pros. Pakutanga zvaitaridza kuti vaisakwanisa kuzviita nekuda kwekuoma kwaivepo uye nekuda kwezvinhu, zvisinei izvozvi zvave kugadzirira.
Apple mutengesi TSMT ave achikwanisa kugadzirisa matambudziko ehunyanzvi ekugadzira miniLED zvinoratidzwa izvo zvichazoshandiswa mune iri kuuya inogadziriswazve 14- uye 16-inch MacBook Pro mamodheru. Sezvakataurwa DigiTimes, TSMT yakanga yatarisana nemitemo yekugadzirwa nebhodhi redunhu uye zvinhu zvekunamatira mune miniLED inoratidzira yeMacBook Pro mamodheru ari kuuya. kugadzirwa kune anopfuura 95%.
TSMT ndiyo yega SMT sevhisi inopa iyo ichangoburwa 12,9-inch iPad Pro miniLED mwenje. Inotarisirwa kuita zvakafanana kune maviri anotevera MacBook mamodheru. Nekuda kwenyaya dzine pcbs uye zvinhu zvekunamatira, TSMT's yekupfuura mareti epamusoro pegomo mini miniLED backlights anga asina kukwana zvakakwana pakutanga. Mushure mekuchinja vatengesi vezvinhu zvekunamatira, TSMT yakasimudza mitengo yekudzoka kune anopfuura 95% nhasi.
Iyo nyowani 14 uye 16-inch MacBook Pros iyo inotarisirwa kusvika neanoverengeka matsva akadai seMagSafe, kubviswa kweTouchBar, dhizaini nyowani uyezve neiyo M1 chip. Zvine musoro kuti ivo vave neiyi tekinoroji pane avo skrini. Vakamumirira semester yechipiri ye2021. Saka kana iwe uchida kumutsiridza yako laptop, zvirinani kumirira zvishoma nekuti idzi nyowani MacBook Pro inotaridzika chaizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » TSMT yakagadzirira kuve neiyo miniLED skrini yeiyo nyowani MacBook Pro yakagadzirira mukupera kwa2021